हाम्रो द्रुत प्रवेश गाइड हेर्नुहोस् »होज विश्वविद्यालय
पसल हक्स गियर
पसल अमेजन मुस्कान
डिग्री र प्रमाणन कार्यक्रम खोजी
नेट मूल्य कैलक्यूलेटर
फ्यूचर हक्सलाई स्वागत छ!
Hodges U मा तपाईंलाई स्वागत छ! हामीलाई थाहा छ कि तपाईको शिक्षालाई छनौट गर्नु एउटा रमाईलो निर्णय हो जुन एक प्रश्नले भरिपूर्ण छ। Hodges U को साथ, हामीले तपाईंलाई कभर गरेका छौं।
हाम्रो योग्य कलेज भर्ना समन्वयकहरूले तपाइँलाई आवेदन प्रक्रिया को माध्यम बाट आफ्नो आवेदन सार्न मद्दत गर्दछ। चाहे तपाईं स्नातक, स्नातक, ESL, वा प्रमाणपत्रहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ, हामी यहाँ छौं तपाईंलाई कलेजको अनुभवबाट अधिक लाभ लिन मद्दतको लागि।
पहिलो चरण सबैभन्दा गाह्रो छ। आजको यात्रा सुरु गर्नुहोस्।
हाम्रो प्रवेश को द्रुत दृश्य प्रक्रिया
तपाइँको आवेदन पूरा गर्नुहोस्।
तपाइँको व्यक्तिगत प्रवेश सल्लाहकार संग कुरा गर्नुहोस्।
तपाइँको समर्थन कागजात पेश गर्नुहोस्।
स्वीकृति, अभिविन्यास, र पञ्जीकरण। तपाईं लगभग त्यहाँ हुनुहुन्छ!
प्रत्येक चरणको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ? तल हामी तपाइँलाई सम्पूर्ण प्रक्रियामा हिड्नेछौं।
डिग्री प्रोग्राम खोजी
चरण १ - तपाइँको आवेदन बुझाउनुहोस्
प्रवेश प्रक्रियाको पहिलो चरण तपाईको आवेदन बुझाउनु हो। यो पेश गरेर अनलाइन गर्न सकिन्छ द्रुत अनुप्रयोग वा फोर्ट मायर्समा हाम्रो क्याम्पस भ्रमण गरेर।
चरण २ - तपाइँको व्यक्तिगत प्रवेश सल्लाहकार संग कनेक्ट गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको छिटो अनुप्रयोग अनलाइन बुझाउनुहुन्छ भने, तपाइँको व्यक्तिगत प्रवेश सल्लाहकारले तपाईलाई फोन, पाठ, र / वा ईमेलद्वारा सम्पर्क गर्दछ तपाईको भविष्यको बारेमा छलफल गर्न समय सेट गर्न होजस् यूमा। यो छलफल फोनमा वा व्यक्ति भित्र हुन सक्छ। हाम्रो फोर्ट मायर्स क्याम्पस।
परिचय छलफलको उद्देश्य तपाईंलाई यो निर्धारित गर्न मद्दत गर्नु हो कि होज्स विश्वविद्यालय तपाईंको उच्च शिक्षा आवश्यकताको लागि सही छ कि छैन र सहयोगी रूपमा होजजेस विश्वविद्यालयमा तपाईंको शिक्षाको लागि अनुकूल मार्ग निर्माण गर्न। एक पटक यो चरण पूरा भएपछि, तपाईं हाम्रो सामुदायिक पोर्टलमा एक आमन्त्रित प्राप्त गर्नुहुनेछ जहाँ तपाईं आफ्नो निजीकृत आवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुहुनेछ, आवश्यक हुन सक्ने कुनै पनि कागजातहरू सबमिट गर्नुहोस्, र तपाईंको आवेदन शुल्क तिर्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ क्याम्पसमा व्यक्तिगत रूपमा तपाइँको आवेदन बुझाउनुहुन्छ भने, चरण १ र २ सँगै जोडिन सकिन्छ।
चरण - - तपाइँको कागजात बुझाउनुहोस्
आवश्यक कागजातहरू तपाईंको रूचि, शैक्षिक ईतिहास, भुक्तान विधि, र नागरिकता स्थितिको आधारमा भिन्न हुन सक्दछ। तपाईंको प्रवेश सल्लाहकार तपाईंलाई आवश्यक कागजात मार्फत मार्गदर्शन गर्दछ।
आवश्यक कागजातमा समावेश हुन सक्छ:
वित्तीय सहायता कागजात
चिन्ता नलिनुहोस् हामी तपाईलाई कागजात प्रक्रिया मार्फत सहयोग गर्ने छौं। हामी यसलाई सकेसम्म सजिलो बनाउँदछौं!
चरण and र पछाडि - स्वीकृति र पञ्जीकरण। तपाईं लगभग त्यहाँ हुनुहुन्छ!
एकचोटि तपाईंले आवेदन प्रक्रिया पूरा गरेपछि, तपाईं केही दिन भित्र तपाईंको स्वीकृति निर्णय प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामी तपाइँलाई तपाइँको दर्तालाई अन्तिम रूप दिन सम्पर्क गर्नेछौं, र तपाइँ आधिकारिक रूपमा होज यूमा नामांकन हुनुहुनेछ!
बोल्ड हुनुहोस्। आज लागू गर्नुहोस्।
विशेष नामांकन प्रक्रियाहरू
केहि कार्यक्रमहरूलाई माथिका भर्ना चरणहरूको अतिरिक्त विशेष नामांकन प्रक्रियाहरू आवश्यक हुन्छ। विशिष्ट कार्यक्रम जानकारीका लागि कृपया तलका पृष्ठहरू हेर्नुहोस्।
BSN - नर्सिंग
नीतिहरु र Hodges विश्वविद्यालय को लागी प्रक्रियाहरु को बारे मा विद्यार्थी अधिकार र उत्तरदायित्व र विद्यार्थी गुनासो विद्यार्थी पुस्तिका मा प्रकाशित छन्, जुन पाउन सकिन्छ यहाँ.
यदि विद्यार्थीलाई लाग्छ कि उजुरी संस्था द्वारा ठीक तरिकाले ब्यबस्थापन गरिएको थिएन, विद्यार्थीले आफ्नो गुनासो निम्न राज्य सम्पर्कमा पेश गर्न सक्नेछन्:
अभिव्यक्ति को कार्यालय
राज्य बाहिर को दूर शिक्षा बिद्यार्थीहरु:
राज्य प्राधिकरण पारस्परिक सम्झौता (SARA) अन्तर्गत भाग लिने राज्य बाहिरका दूर शिक्षा बिद्यार्थीहरु को लागी उजुरी प्रक्रिया, जसले आन्तरिक संस्थागत गुनासो प्रक्रिया र लागू राज्य गुनासो प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन्, फ्लोरिडा राज्य प्राधिकरण पारस्परिक सम्झौता मा गैर-निर्देशकीय उजुरी अपील गर्न सक्छन्। (FL-SARA) Postsecondary पारस्परिक दूरी शिक्षा समन्वय परिषद (PRDEC) मा FLSARAinfo@fldoe.org.
उजुरी प्रक्रिया मा थप जानकारी को लागी, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् FL-SARA उजूरी प्रक्रिया वेब पेज।
आज तपाईंको #MyHodgesStory मा सुरू गर्नुहोस्।
यो वेबसाइटले वेबसाइट मार्फत नेविगेट गर्दा तपाईँको अनुभव सुधार गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। यी कुकीजहरू, आवश्यक रूपमा वर्गीकृत कुकीजहरू तपाइँको ब्राउजरमा भण्डार गरिएका छन् किनभने तिनीहरू वेबसाइटको आधारभूत कार्यक्षमताको कामका लागि आवश्यक छन्। हामी तेस्रो-पक्ष कुकीहरू प्रयोग गर्दछौं जुन तपाईले यो वेबसाइट कसरी प्रयोग गर्ने विश्लेषण र बुझ्न मद्दत गर्दछ। यी कुकीजहरू तपाईंको ब्राउजरमा मात्र तपाईंको सहमतिको साथ भण्डार गरिनेछ। तपाइँसँग यी कुकीजहरू अप्ट-आउट गर्न विकल्प पनि छ। तर यी केही कुकीजहरू छनोट गर्दा तपाईंको ब्राउजिङ्ग अनुभवमा असर हुन सक्छ।